Watch Box - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
jeellry pepa rekutarisa bhokisi nepilo
Yakarasika uye Base Chitsvuku Bhokisi Bhokisi neShongwe Diki Yakatarisa Bhokisi nePilow, yemhando yepamusoro bhokisi bhokisi rine chivharo, paine pilo.Good rinotarisa. Tsvuku Bhokisi Bhokisi, tsika yakadhindwa logo nekupedzisa, yakakosha dhizaini yewadhi bhokisi. Chipo Bhokisi reChirindo, kurongedza wachi sekureva...
Tsika Yakarasikirwa uye Yakagadziriswa Bhodhi Bhokisi
Tsika Yakarasikirwa uye Yakagadziriswa Bhodhi Bhokisi Kadhibhodhi Bhokisi Bhokisi, tarisa bhokisi kadhibhodhi, mhando yepamusoro uye ine logo yakadhindwa. Tsika Yekutarisa Bhokisi, tsika yakajairwa kadhibhokisi bhokisi rine lid yewadhi. Imwechete Bhokisi Bhokisi, isa imwe wachi mubhokisi, inogona nehuputi kana velvet....
Bhuku rakaumbwa C-clip wachi kadhibhokisi bhokisi
Bhuku rakaumbwa C-clip wachi kadhibhokisi bhokisi Luxury chimiro chebhuku rakagadziriswa kadhibhokisi bhokisi ine leatherette kuputira kwekutarisa kurongedza, iro bhokisi rine mapepa ekupukuta rinodhura zvishoma. Wona kadhibhokisi bhokisi nebhokisi C-clip yekutarisa anotarisa, kunewo simbi c-clip yesarudzo yako,...
Rigid kadhibhokisi bhokisi ne c-clip ye bangle
Rigid kadhibhokisi bhokisi ne c-clip ye bangle Yakaomeswa kadhibhokisi bhokisi ne leatherette kuputira kweyeellry bangle kurongedza, iro bhokisi rakapetwa kuputira rinodhura zvishoma. Bangle kadhibhokisi bhokisi nebhokisi C-clip yekubatidza bangle, kunewo simbi c-clip yesarudzo yako, zvakare iwe unogona kusarudza...
Rigid bangle kadhibhokisi bhokisi rine lid
Rigid bangle kadhibhokisi bhokisi rine lid kadhibhodhi bangle bhokisi nepepa rekudhinda kuputira rejeellry bangle kurongedza Bangle bhokisi rine mutsago wekuratidza bangle, kunewo simbi / rabara c-clip yesarudzo yako Kadhibhokisi bhokisi rine chivharo iri nyore bhokisi dhizaini, asi inogona kuita kuti zvigadzirwa...
tsvarakadenga yakashongedzwa zvishongo zvekadhibhokisi bhokisi ne ribhoni
yakanakisa mutsipa zvishongo zvekadhibhokisi bhokisi nebhonzo Akanaka pamutsipa wokutakura bhokisi neakakwira zvemhando yepamusoro zvakadhindwa dhizaini pamutsipa Kune iyi pamutsipa wekadhibhokisi bhokisi , tinowedzera ribhoni kune yekuvhara kwekunze kwebhokisi kuti riite rinotaridzika. Kugamuchirwa kune tsika gadzira...
Pepa pepiro chipo bhokisi rekushongedza zvishongo
Pepa pepiro chipo bhokisi rekushongedza zvishongo Pepa pilo bhokisi rakagadzirwa mune 350gsm art pepa, rakajeka chimiro bhokisi rekushongedza kwezvishongo mbiru bhokisi rekushongedza kwezvishongo pamwe neakaomeswa kufa akacheka mbambo, yakasimba zvakakwana kuti ibvise bepa jewelry zvishongo bhokisi rine mhando...
Chipo Pepa Bhokisi Packaging neRibbon Handle
Packaging: K = K kupinza & kutumira kunze mabhokisi akagadzirwa
Chipo pepa bhokisi kurongedza neribhoni mubato Iyi Chipo Pepa Bhokisi mune yemhando, iyo chena ruvara rwegoridhe stamping logo kumusoro uye kumberi; Pepa Bhokisi neRibbon Hande dhizaini yemaruva inotakura uye inotakura kunze inotakura. Pepa Bhokisi Packaging kugamuchira tsika yakakuita iwe pachako logo uye dhizaini,...
Rectangle Yakakura size Ruva Chipo Mapepa Mabhokisi
Kona hukuru hukuru hwemaruva echipo mapepa emabhokisi Rectangle chimiro Yakakura saizi pabhokisi kadhibhodi zvinhu zvekureba maruva kutakura; Iyi yemaruva yemapepa ebhokisi bhokisi rakakura uye akareba zvakakwana kuti rose rakarongedzwa nehurefu hwakareba; Rectangle dhizaini ndeye nyore kurongedza. Art pepa ine...
Tsika Yemaruva Bhokisi Kadhibhodhi neLid uye Bow
Tsika yemaruva bhokisi kadhibhodi nevharo uye uta Tsika Yemaruva bhokisi kadhibhodi zvinhu nehukuru ribhoni bhokisi rakareba kutakura maruva; Iyi yemaradhi kadhibhodhi pepa bhokisi rakakura zvakakwana kuti chena rose rirongedze nehurefu hwakareba; Kadhibhokisi bhokisi rine uta dhizaina rakasimba uye rakanaka...
Yepadenga pabhokisi rekutarisa bhokisi rine velvet yekuisa
Yepadenga pabhokisi rekutarisa bhokisi rine velvet yekuisa Pepa remahara Rebhokisi Bhokisi rakagadzirwa nepepa rekunyora rine pepa; Elegante orange color uye dema logo offset kudhinda kunotaridzika becutiful; Iyo Bhokisi rekutarisa rine yakakwira magumo machena velvet yekuisa kuti ubate uye kuratidza wachi. Iri Pepa...
Tsika Kadhibhodi Inotarisa Pepa Packaging Bhokisi
Yepadenga pabhokisi rekutarisa bhokisi rine velvet yekuisa Tarisa Pepa Packaging Bhokisi rakagadzirwa neyakagadzirwa pepa rine pepa bhodhi; Elegante orange color uye dema logo offset kudhinda kunotaridzika becutiful; Iyo Kadhibhodhi Bhokisi Bhokisi rine yakakwira magumo machena velvet yekuisa kuti ubate uye kuratidza...
Hombe mapepa ekuchengetedza bhokisi rekuisa bhokisi
Hombe mapepa ekuchengetedza bhokisi rekuisa bhokisi Yepamberi Yebhokisi Bhokisi rakagadzirwa neyakagadzirwa neapepa pepepa; Elegante orange color uye dema logo offset kudhinda kunotaridzika becutiful; Iyo chivharo uye chigadziko mhando yePakeji Bhokisi neine yakakwira magumo machena velvet yekuisa yekurinda kubata uye...
Wholesale Bhokisi rekutarisa Yakachipa Pepa Bhokisi
Wholesale bhokisi rekutarisa rakachipa pepa rekutarisa bhokisi Yekupedzisira Bhokisi Bhokisi rakagadzirwa neine art pepa rine pepa bhodhi; Elegante orange color uye dema logo offset kudhinda kunotaridzika becutiful; Iyo chivharo uye chigadziko mhando yePairo Bhokisi Bhokisi maitiro ane yakakwirira magumo machena...
Tarisa bhokisi rakarongedzwa chipo chekuratidza
Tarisa bhokisi rakarongedzwa chipo chekuratidza Tarisa Kuratidzira Bhokisi rakagadzirwa neyakagadzirwa nepi pepa rine pepa; Elegante orange color uye dema logo offset kudhinda kunotaridzika becutiful; Iyo yeBhokisi Bhokisi Chipo inorongedza nehuremu hwakakwira chena velvet inoisa kune kuturika uye kuratidza wachi. Iri...
Tsika yakachipa yekutarisa yakatakura zvipo bhokisi pepa
Tsika yakachipa yekutarisa yakatakura zvipo bhokisi pepa Tarisa Bhokisi Pepa zvinhu zvakagadzirwa zvemhizha pepa rine pepa bhodhi; Elegante orange color uye dema logo offset kudhinda kunotaridzika becutiful; Iyo chivharo uye chigadziko mhando yeHurumende Yekutarisa Chipo Bhokisi maitiro ane yakakwirira magumo machena...
Yakakora wachi zvishongo pepa bhokisi newindo
Yakakora wachi zvishongo pepa bhokisi newindo Yakuda wachi bhokisi , yakapfava 2pcs pabhokisi bhokisi ine chena zvinyoro pilo yekuratidzira kuratidza tarisa zvishongo zvinopfekedza bhokisi , zvakaomarara kadhibhodhi kutarisa bhokisi rakapetwa Yakakomberedza dema wachi bhokisi newindo rekushongedza kwewachiwaridza...
Round jewelry zvishongedzo zvekuisa bhokisi neakakoshwa ganda
Round jewelry zvishongedzo zvekuisa bhokisi neakakoshwa ganda Round Jewelle Box Bhokisi rudzi rwezvishongedzo Yakadaro Yezvishongo Packaging Bhokisi kugamuchira tsika logo kudhinda kana logo stamping. Mukati Yejecha Bhokisi neLeather Insert yemutsipa kana chidhindo chakabata. iyo yekuisira idiki denderedzwa...
Tsika logo kadhibhodi zvishongo zvinoratidza bhokisi
Tsika logo kadhibhodi zvishongo zvinoratidza bhokisi Kadhibhodi Yezvishongo Bhokisi rudzi rwezvishongedzo Yakadaro Yejecha Display Bhokisi rinogamuchira tsika logo kudhinda kana logo stamping. Forodha Logo Zvishongo Bhokisi mukati mehombodo yekuisa yekushongedza zvakachengeteka muridzi. Ichena uye dema inobvisa...
square epurasitiki wachi bhokisi ne velvet pilo
square epurasitiki wachi bhokisi ne velvet pilo Square wachi bhokisi, wachi yekurongedza bhokisi , yakagadzirwa mumhando yepamusoro bhokisi repurasitiki, kunze kwakapetwa nepepa rekudhinda uye mukati mune suede Yepamberi yemabhokisi epurasitiki ekucherekedza ane velvet pilo yekutarisa yekutarisa, bhokisi repurasitiki...
Kutengesa kwakanaka vatema vekare bhokisi bhokisi
Kutengesa kwakanaka vatema vekare bhokisi bhokisi Giredhi yakanaka yewaini yebhokisi bhokisi, saizi yakakodzera yewaini, Zvakare zvakare zvakanaka seWine Chipo Bhokisi, yakapusa asi isingadhuri, inotaridzika zvakanaka, Waini bhokisi rakabata, riri nyore kutakura uye rakawanda runyoro. 1) 17years zviitiko kuvimbisa...
Cusotm Kadhibhodi Kutenderera Chipo Bhokisi neRibbon Handle
Yakapfeka zvipfeko zvemagineti bhokisi
Watch Box Watch box Watch Bhokisi Watch gift box Paper watch box Magnetic box luxury watch box Cloth box